Niteraka vokatra maro teo anivon’ny fianakaviana tsirairay avy ny fanapa-kevitra noraisin’ny fanjakana momba ny hamehana tsy maintsy nampiharina. Na dia teo ary ny fasahirana hita teo anivon’ireo fianakaviana maro, izay mitady ny hohanina anio, dia tsy nijery azy ireo fotsiny ny fikambanana salezianina eto Fianarantsoa.
Tamin’izany, mba entina hanamaivanana ny fahoriana tampoka nateraky ny aretina teo amin’ny fianakaviana, dia nanolotra vary sy atody, izay vokatra avy ao an-toerana ihany, ho an’ireo fianakavian’ny ankizy miisa 230 izay iandreketan’ny tetikasa TAIZA. Marihina moa fa efa fanindroany no nanaovan’ny fikambanana izao hetsika izao ary ny fizarana manaraka dia atao ny alatsinainy 27 Aprily izao. Ireny vokatra ireny dia avy amin’ny ezaka karemy 2020 ary ihany koa ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fikambanana.
Mba ho mariky ny firaisan-kina teo amin’ireo nijaly sy tena sahirana ary koa ny fisian’ireo ONG sasany, nanomana vina ho an’ireo fianakaviana 635, izay ankizy avy ao amin’ny TAIZA, tanora avy ao amin’ny C.F.T. ary mpiasa ato amin’ny salezianina Fianarantsoa no mandrafitra azy. Izany no natao mba hentina hanampiana azy ireo be kokoa.
Marina fa tsy ny rehetra no afaka nisitraka izany fanampiana izany, fa kosa izay tsirambin’ny tanana nisy teo am-pelatanana no afaka namonjena ny fianakiviana sahirana nandritra izao fotoan-tsarotra izao.
Post-Noviciat Don Bosco Fianarantsoa